Lazarosy sy ilay mpanankarena - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Ny hoavy > Lazara sy ilay lehilahy manan-karena
Efa henonareo ve fa ireo izay maty ho tsy mpino dia tsy afaka manatona an'Andriamanitra intsony? Fotopampianarana mahatsiravina sy manimba izy io, satria porofo iray izay andinin-tsoratra iray ao amin'ny fanoharana ny manankarena sy i Lazarosy mahantra. Na izany aza, toy ny andalan-tsoratra ara-baiboly rehetra, ity fanoharana ity dia ao anatin'ny toe-javatra iray ary azo atao tsara ny mahazo an'io toe-javatra io Ratsy foana ny mametraka fampianarana amin'ny andininy iray - ary mihoatra noho izany aza raha amin'ny tantara izay tsy mitovy ny hafatr'izy ireo. Jesosy dia nizara ny fanoharana momba ilay manankarena sy Lazarosy mahantra noho ny antony roa: voalohany, ny fandavana ny fandavana ny mpitondra ny Isiraely hino azy, ary faharoa, dia mandà ny finoana mivaona fa ny harena dia mariky ny fankasitrahan'Andriamanitra. raha ny fahantrana kosa dia porofon'ny tsy fahaizany.
Ny fanoharana momba ilay mpanankarena sy Lazarosy mahantra no farany amin’ireo andiana dimy hafa izay nolazain’i Jesosy tamin’ny Fariseo sy mpanora-dalàna maromaro izay, na dia tia vola sy nionona aza, dia tafintohina tamin’i Jesosy nikarakara ny mpanota sy niara-nisakafo taminy. azy ireo (Lioka 15,1 sy 16,14). Talohan’izay dia efa nilaza ny fanoharana momba ny ondry very sy ny denaria very ary ny zanaka adala izy. Tamin’izany no tian’i Jesosy hazava amin’ny mpamory hetra sy ny mpanota, ary koa ireo Fariseo sy mpanora-dalàna tezitra izay nilaza fa tsy manana antony hibebahana izy ireo, fa misy fifaliana bebe kokoa amin’Andriamanitra any an-danitra ny amin’ny mpanota izay manomboka fiainam-baovao noho ny amin’izany. mihoatra ny sivy amby sivifolo izay tsy mila izany (Lioka 15,7 Baiboly vaovao tsara). Tsy izay ihany anefa.
Vola mifanohitra amin'andriamanitra
Tonga teo amin’ny tantara fahefatra i Jesoa tamin’ny alalan’ny fanoharana momba ilay mpitandrina tsy marina (Lioka 16,1-14). Ny tena hafatr’izy ireo dia izao: Raha tia vola toa ny Fariseo ianao, dia tsy ho tia an’Andriamanitra. Nitodika manokana tamin’ny Fariseo i Jesosy, ka nilaza hoe: Hianareo no manamarina ny tenanareo amin’ny olona; fa Andriamanitra mahalala ny fonareo; fa fahavetavetana eo anatrehan’Andriamanitra ny avo amin’ny olona (and 15).
Ny Lalàna sy ny Mpaminany dia manambara - araka izany koa ny tenin'i Jesosy - fa tonga ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny olona rehetra dia manery ny tenany hiditra ao (and. 16-17). Ny hafany mifandray amin’izany dia izao: Koa satria sarobidy loatra amin’ny olona ny zava-tsarobidy indrindra fa tsy izay ankasitrahan’Andriamanitra, dia mandà ny antsony mampahatahotra ianao - ary miaraka amin’izany koa ny fahafahana hahazo ny fidirana ao amin’ny fanjakany amin’ny alalan’i Jesosy. Ao amin’ny andininy faha-18 dia ambara – amin’ny heviny ara-panoharana – fa ireo mpitarika ny finoana jiosy dia nanda ny lalàna sy ny mpaminany izay nanondro an’i Jesosy ka niala tamin’Andriamanitra (cf. Jeremia). 3,6). Ao amin’ny andininy faha-19, tafiditra ao anatin’ireo fanoharana efatra teo aloha, dia manomboka ny tantaran’ilay mpanankarena sy Lazarosy mahantra, araka ny nolazain’i Jesosy.
Tantara iray amin'ny tsy finoana
Misy mpilalao telo lehibe ao amin'ilay tantara: ilay mpanankarena (mijoro ho an'ny Farisianina mpierina), Lazarosy mpangataka mahantra (taratry ny kilasy ara-tsosialy izay nohamavoin'ny Farisianina) ary farany i Abrahama (izay ny tratrany eo amin'ny tontolon'ny jiosy dia midika hoe fampiononana sy Fandriampahalemana tandindona any ankoatra).
Ny tantara dia milaza ny fahafatesan'ny mpangataka. Gaga anefa ny mpihaino azy tamin'ireto teny ireto: ... nentin'ny anjely teo an-tratran'i Abrahama izy (and.22). Izany dia ny mifanohitra tanteraka amin'izay noheverin'ny Fariseo tamin'ny lehilahy toa an'i Lazarosy, izany hoe ny olona toa izany dia mahantra sy marary satria satria nomelohin'Andriamanitra izy ireo ary tsy nisy afa-tsy ny fampijaliana aorian'ny fahafatesany any amin'ny helo. Nampianatra azy ireo tsara kokoa anefa i Jesosy. Diso fotsiny ny fomba fijerinao. Tsy nahalala na inona na inona momba ny fanjakan-drainy izy ireo ary tsy nety ihany koa raha ny fanombanan'Andriamanitra ny mpangataka, fa ny fitsarany azy ireo koa.
Ary gaga i Jesosy avy eo: Rehefa maty ilay lehilahy mpanankarena ary nalevina, dia izy - fa tsy ilay mpangataka - no niharan'ny fampijaliana tany amin'ny helo. Ary nanopy ny masony izy ka nahita an'i Abrahama nipetraka teny lavitra eny, ary Lazarosy eo anilany koa. Ary hoy izy: Ry Abrahama raiko ô, mamindrà fo amiko, ka iraho Lazarosy hanoboka ny tendron'ny rantsan-tànany amin'ny rano hampangatsiaka ny lelako; satria mijaly amin'ny afo aho (and 23-24).
Raha ny tena marina anefa, dia nanao izao fanambarana izao tamin’ilay mpanankarena i Abrahama: Efa tia harena ianao nandritra ny androm-piainanao, ary tsy namela fotoana ho an’ny olona toa an’i Lazarosy ianao. Saingy manana fotoana ho an'ny olona toa azy aho, ary izao izy miaraka amiko ary tsy manana na inona na inona ianao. - Avy eo dia manaraka ilay andininy izay matetika esorina ivelan'ny teny manodidina: Ary ankoatra izany, misy elanelana lehibe eo aminao sy izahay, ka tsy misy olona te hiampita aminao avy eto afaka mankeny, ary tsy misy afaka manatona anay. avy eo (Lioka 16,26).
Efa nanontany tena ve ianao hoe maninona no misy te hifindra avy eto aminao ho eo amin'ny toerana voalohany? Mazava be ny antony tokony hisarihana olona ho any amintsika, fa ny tsy te hanohitra ny lalana mifanohitra dia tsy misy dikany - sa misy an'izany? Niresaka tamin'ilay mpanankarena i Abrahama tamin'ny firesahany taminy tamin'ny zanany; dia nilaza izy fa na dia ireo izay te hanatona azy aza dia afaka manao izany noho ny fisarahana lehibe. Ny fanambarana miorina amin'ity tantara ity dia misy tokoa fa ny iray no naharesy io fizarana io noho ny an'ny mpanota.
Ny tetezana miampita ny fizarana
Nanolotra ny Zanany ho an’ny mpanota rehetra Andriamanitra, tsy ho an’izay toa an’i Lazarosy ihany, fa ho an’ny mpanankarena koa (Jaona. 3,16-17). Fa ilay fanjakana voalaza ao amin’ilay fanoharana, izay naneho ny Fariseo sy ny mpanora-dalàna izay nanameloka an’i Jesoa, dia nandà ny Zanak’Andriamanitra. Nitady izay zava-kendren’ny fiezahany hatramin’izay izy: ny hahasoa ny tena ka tsy ho azon’ny hafa.
Nofaranan’i Jesosy io tantara io tamin’ny fangatahana ilay mpanankarena mba hisy hampitandrina ny rahalahiny mba tsy hanjo azy ireo izany. Fa hoy Abrahama taminy: Manana an'i Mosesy sy ny mpaminany izy; aoka hihaino izany izy (and. 29). Jesosy koa dia efa nanamarika teo aloha (jereo and. 16-17) fa ny lalàna sy ny mpaminany no vavolombelona manambara Azy - fanambarana izay tsy nekeny sy ny rahalahiny (cf. Jao. 5,45-47 sy Lioka 24,44- iray).
Tsia, ry Abrahama Ray, hoy ny navalin’ilay mpanankarena, raha misy maty manatona azy, dia hibebaka izy6,30). Namaly i Abrahama hoe: Raha tsy mihaino an’i Mosesy sy ny mpaminany izy ireo, dia tsy ho resy lahatra koa raha misy mitsangana amin’ny maty (and31).
Ary tsy resy lahatra izy ireo: Ary ny Fariseo sy ny mpanora-dalàna ary ny mpisoronabe izay niray tetika hanombo an’i Jesosy tamin’ny hazo fijaliana, dia nankany amin’i Pilato, rehefa maty Izy, ka nanontany Azy ny amin’ny hevitry ny lainga momba ny fitsanganana amin’ny maty (Matio 2.7,62-66), ary nanenjika sy nanenjika ary namono izay nihambo ho mino izy ireo.
Tsy nilaza an'io fanoharana io Jesosy mba haneho amintsika mazava ny lanitra sy ny helo. Raha ny tokony ho izy dia nanohitra ireo mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany izy izay nikatona ho amin'ny finoana sy ny mpanankarena am-po sy tia tena mandrakariva. Mba hanazavana izany dia nampiasa ny sary amin'ny fiteny jiosy mahazatra izy mba hanehoana ny any aoriana (miaraka amin'ny fialofana any amin'ny helo natokana ho an'ny ratsy fanahy sy ny maha-olo-marina eo an-tratran'i Abrahama). Amin'ity fanoharana ity dia tsy nitazona ny heviny na ny maha-marina ny tandindona jiosy momba ny any aoriana izy, fa nampiasa an'io fiteny io fotsiny hanehoana ny tantarany.
Azo antoka fa tsy ny hanome fahafaham-po ny fahalianantsika mafy momba ny ho any an-danitra sy ny any amin’ny helo no tena nifantohany. Fa ny fanahiany kosa dia ny haharihary amintsika ny misterin’Andriamanitra (Romana 16,25; Efesianina 1,9 sns), ny zava-miafina tamin’ny andro taloha (Efes 3,4-5): fa Andriamanitra ao Aminy, Jesoa Kristy, Zanaky ny Ray Tsitoha tonga nofo, no nampihavana izao tontolo izao taminy hatramin’ny voalohany (2. Korintiana 5,19).
Ka raha miatrika ireo antsipirihany mety ho avy any an-tany isika, dia afaka mitarika antsika lavitra lavitra amin'ny fahalalana mitovy amin'ilay nanidy ilay lehilahy manankarena tamin'io tantara io: tokony ho ary mino ny olona nody tamin'ny maty isika.